Munaasabadii Soo Dhawaynta Martidii Soomaaliya - Cakaara News
Munaasabadii Soo Dhawaynta Martidii Soomaaliya
Jigjiga( Cakaaranews ) Sabti, 30ka April 2016. Munaasabad si heer sare ah loo soo abaabulay oo lagu soo dhawaynayay wufuudii kasocotay dawlada soomaaliya oo ay kamid yihiin: wasiirka boostada iyo isgaadhsiinta dawlada soomaaliya mudane Maxamed Jaamac Mursal, madaxwaynaha ismaamulka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan, madaxwaynaha dawlad goboleedka Galmudug mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo mas’uuliyiin kale oo wehelinaysay ayaa caawa kadhacday xarunta madaxtooyada DDSI.
Hadaba munaasabadan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo ugu horeeyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, dhamaan martida loo qabtay xafladan soo dhawaynta ah, hogaaminta sare ee xukuumada deegaanka, kabineega DDSI, maamulada gobolada iyo degmooyinka, heerarka kaladuwan ee shaqaalaha xafiisyada heer deegaan,heerarka kaladuwan ee bulshada sida: odoyaal dhaqameedka deegaanka, hooyooyin, dhalinyaro iyo marti sharaf kale.
Waxaana ugu horayn lagu furay casho sharaf si heer sare ah loo soo diyaariyay oo uu madaxwaynuhu ufuray dhamaanba kasoo qaybgalayaasha munaasabadan. Kadibna, waxaa lagalay hoolka shirarka dhexe ee xarunta madaxtooyada iyadoo munaasabadii soo dhawayntu si habsami leh halkaa uga bilaabantay.
Kooxaha fanka iyo suugaanta deegaanka ayaana ugu horayn masraxa kusoo bandhigay heesihii iyo dhaantooyinkii hidaha iyo dhaqanka ee uu deegaanku caanka ku ahaa iyagoo runtii gil-gilay soona jiitay dareenka kasoo qaybgalayaasha munaasabadan.
Waxaana bilawgii furitaanka xafladan lagu soo dhaweeyay wasiirka boostada iyo isgaadhsiinta dawlada soomaaliya mudane Maxamed Jaamac Mursal oo sheegay inuu aad ugu farxay uguna riyaaqaynsoo dhawaynadii iyo booqashooyinkii kaladuwanaa isagoo runtii kamarkhaati kacay inaysan jirin cid haysata maanta nabadgelyada deegaanka soomaalida kajirta iyo horumarka deg-dega ah ee uu deegaanku gaadhay oo mudan kudayasho. Wuxuuna kubooriyey xukuumada iyo shacabkaba inay sii adkeeyaan nabadgelyada ay haystaan waayo nabadgelyo-daro dhibaatada ay leedahay waxaa tusaale idiinku filan ayuu yidhi wasiirku, ‘‘soomaaliya’’. Wuxuuna mahadcelin balaadhan halkaa uga soo jeediyay dhamaanba xukuumada iyo shacabka DDSI oo uu ugu horeeyo madaxwayne CMC isagoo ugudanbayna xusay inuu khibrad wayn kakorodhsaday booqashaduu deegaanku kuyimid.
Sidoo kale, madaxwaynaha dawlad goboleedka jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan oo lagu soo dhaweeyay madasha shirka ayaa khudbad dhaxal-gal ah oo dhinacyo badan taabanaysa kasoo jeediyay goobtaasi isagoo kawarbixiyay dhibaatada nabadgelyo-daradu leedahay ee kamuuqata soomaaliya. Xusayna nabadgelyada iyo horumarka kahanaqaaday deegaanka inay yihiin kuwo in lagaga daydo mudan oo ay markhaati kayihiin isagoo gaar ahaan carabka kudhuftay biyo-xidheenadii, dhismayaashii sida casriga ah loo dhisay iyo booqashadii magaalada jigjiga ay soo booqdeen iyagoo lug iyo baabuurba bilaa istaaf kusoo maray. Sheegayna inay khibrad wanaagsan kaqaateen waxyaabihii ay kusoo arkeen booqashooyinkii kaladuwanaa. Wuxuuna kacodsaday xukuumada iyo shacabka deegaankaba maadaama aan nahay dad walaalo ah oo daris ah laakiin kaladawlad ah inaan waxyaabo badan kacaawino. Madaxwaynaha ayaana hadalkiisii kusoo xidhay mahadnaq wayn oo uu usoo jeediyay xukuumada DDSI ee uu ugu horeeyo madaxwaynuhu isagoo heerarka kaladuwan ee bulshadana kubooriyay inay sii halkaa kasii wadaan wanaaga ay maanta haystaan ee aysan dib unoqon. Wuxuuna amaan gaar ah usoo jeediyay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar isagoo kubooriyay xukuumada iyo shacabkaba inay garabtaagnaadaan.
Sidoo kale, madaxwaynaha dawlad goboleedka galmudug mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa kamahadceliyay xafladan soo dhawaynta qaaliga ah sheegayna inay tahay mid taariikhi ah oo uu aad ugu faraxsan yahay. Wuxuuna madaxwaynuhu si wayn ula dhacay nabadgelyada iyo horumarka uu ku arkay deegaanka oo uu sheegay inuusan marnaba sidan kafilanaynin isagoo kawarbixiyay nabadgelyodarada taala soomaaliya. Wuxuuna hadalkiisii kusoo xidhay inuu diyaar uyahay xalinta khilaafkii xuduuda labada dhinac.
Dhanka kale, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo soo xidhay xaflada ayaa ugu horayn soo dhaweeyay mas’uuliyiinta kasocotay dawlada soomaaliya isagoo sheegay inay faxad utahay in caawa munaasabadan la isugu yimaado sababtoo ah waa halgankii EPRDF ay qawmiyadaha itoobiya usoo gashay ee ay kudhalatay itoobiyada cusub ee maanta ee kudhisan danaha shacabka ee xiligii dhargiga madhici jirin ayuu yidhi in munaasabad noocan ah la isugu yimaado. Wuxuuna madaxwaynuhu intaa kudaray in dalka itoobiya uu tusaale u yahay wada noolaanshaha diimaha, dhaqanka, luuqadaha iyo jinsiga intaba iyo in diinta islaamku ay kusoo horaysay dalka itoobiya sida boqorkii caadilka ahaa ee Najaashi ee uu rasuulku (N.N.K.H)sheegay, muhaajiriintii usoo kicitimay itoobiya ee nabada lagu sooray iwm. Madaxwaynaha ayaana hadalkiisii kusoo xidhay in xukuumadiisa iyo shacabkiisuba ay hadh iyo habeen kago’antahay ladagaalanka argagixisada alqushaash iyo kuwa lamidka ah sababtoo ah waa xil, dhaqaale iyo siyaasad doon. Diintana waxba kama yaqaanaan ayuu yidhi isagoo xusay in heshiiska shacabka xuduuda labada dhinac iyo guud ahaanba garab istaaga iyo wada shaqaynta shacabka walaalaheen ah ee soomaaliya aan diyaar unahay. Waxaana tusaale cad u ah ciidamada Amisom-Ethiopia ee gudaha soomaaliya kuladagaalamaya cadawga shacabka soomaaliya ee alqushaash.